Ezona zicelo zibalaseleyo zokusebenzela ekhaya | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Izicelo, ngokubanzi, Windows
Ukusebenza ekhaya kunokubonakala ngathi kukuhle kubo bonke abantu abangazange babe nethuba lokwenza njalo. Ngengxaki ye-coronavirus, iinkampani ezininzi zicinga ngokuvumela abanye abasebenzi, kangangoko kunokwenzeka, ukuba basebenze emakhayeni abo, ukuze bangakhubekisi ngokupheleleyo umsebenzi wenkampani yabo.
I-ecosystem yezicelo ezikhoyo namhlanje kwiikhompyuter nakwizixhobo eziphathwayo zibanzi kakhulu kwaye sinokufumana izisombululo zazo zonke iintlobo ukuze sikwazi ukusebenza kude ngokungathi besikwenza buqu. Ukuba awukaqwalaselanga ukuba zeziphi ezona zicelo zibalaseleyo zokusebenzela ekhaya, ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda.
1 Okokuqala kwaye ngaphambi kwento yonke
2 Iinkonzo zonxibelelwano
2.1 Amaqela eMicrosoft
3 Ii -apps zokucwangcisa umsebenzi
4.2 Amaphepha, amanani kunye neNkcazo
5 Isicelo sokuqhagamshela kwezinye iikhomputha ukude
5.2 Idesktophu ekude yeChannel
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuseka inkqubo esingakwaziyo ukuphuma kuyo, oko kukuthi, siqwalasele umsebenzi ngokungathi siseofisini ebonakalayo, nekhefu layo lekofu, ikhefu lesidlo sasemini. Kufuneka sisete neshedyuli yomsebenzi. Ukusebenza ekhaya akuthethi ukuba kuya kufuneka sifumaneke kubaphathi okanye, ukuba kunjalo, kufuneka sisebenze iiyure ezingama-24 ngosuku.
Ukuba sisebenza ekhaya kwaye sigxile emsebenzini wethu kwikhompyuter yethu, sifuna yonke into ibekho kwikhompyuter yethu. Ukuba sithetha noogxa bethu, kuya kufuneka sisebenzise i-smartphone yethu, siya kuphazamiseka ngokukhawuleza nge-Instagram, Facebook, Twitter okanye ngokuphendula kwizaziso ze-WhatsApp. Kwimarike sinezicelo ezahlukeneyo ezijolise kwimeko yeshishini ephepha ezi ngxaki.
Amaqela kaMicrosoft sisixhobo esenziwa nguMicrosoft ukuba sisebenze kungekuphela ekhaya, kodwa naseofisini, ukuze sikwazi ukunxibelelana noogxa bethu ngaphandle kokusebenzisa ifowuni nanini na. Ayisivumeli nje kuphela ukuba sincokole, kodwa ikwasivumela ukuba sithumele iifayile ngokukhawuleza. Ukongeza, ukudityaniswa neOfisi 365, xa kufikwa ekusebenzeni ngokubambisana kumaxwebhu sesona sisombululo sisiso. IMicrosoft isimahla.
I-Slack yenye yezicelo zokuqala zokufika kwimarike ukuphucula unxibelelwano lweshishini. Iyasivumela ukuba sithumele naluphi na uhlobo lweefayile, senze iintlanganiso ezibonakalayo ... kodwa ayisiboneleli ngokudityaniswa neOfisi 365, ke ukuba uhlala usebenza abantu abaliqela kuxwebhu olunye, isisombululo esisinikwa nguMicrosoft sesona silungileyo. I-Slack isimahla kwinani elithile labasebenzisi, ngelixa iiMicrosoft Teams zinxulunyaniswa nokubhaliswa kweOfisi 365.
Kwiminyaka yakutshanje, iMicrosoft ikwazile ukuziqhelanisa neemfuno zabasebenzisi kwaye ibisongeza imisebenzi emitsha kwiifowuni zeSkype kunye nokusetyenziswa kweefowuni zevidiyo, isicelo esisimahla nesivumela ukuba sithumele naluphi na uhlobo lweefayile kwaye, njengamaQela kaMicrosoft. , idityaniswe kwiOfisi 365. I-Skype iyafumaneka kwi-iOS, Android, macOS, nakwiWindows.
Nangona sisicelo semiyalezo, njengeWhatsApp, ukungahambelani okunikezelwa sisicelo seekhompyuter kuyenza ukuba ibe sisicelo esihle kakhulu sokusebenzisana ekhaya. Ukongeza, iyasivumela ukuba senze iminxeba evakalayo, ukuze sikwazi ukuyisebenzisa ukubamba iintlanganiso noogxa bethu. I-Telegram isimahla kwaye iyafumaneka kwiWindows, macOS, Android, nakwi-iOS.
Xa kuziwa ekuhleleni imisebenzi ekufuneka yenziwe ngumsebenzi ngamnye kwinkampani, sinesicelo seTrello esinaso. UTrello usinika idashboard ebonakalayo apho sinokucwangcisa kwaye sabele imisebenzi ekufuneka yenziwe ngabasebenzi. Nje ukuba bayenze, bayayimakisha baze baye kwelandelayo. I-Trello isimahla kwaye iyafumaneka kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, iWindows, kunye neMacOS.
Nangona eli candelo linokubonakala lingenangqondo, ayisiyiyo ukuba awuyisebenzisi rhoqo ikhompyuter yakho ukuze usebenze, kuba kusenokwenzeka ukuba awunasicelo sifakelwe ukubhala amaxwebhu, yenza i-spreadsheet okanye iintetho.
Xa usenza naluphi na uhlobo loxwebhu, isisombululo esivela kuMicrosoft sesona silungileyo kwaye sigqibelele esinokufumana namhlanje kwintengiso. Inye kuphela kodwa ifuna ubhaliso kwiOfisi 365, umrhumo ongasivumeli ukuba sisebenzise usetyenziso lwe desktop, kodwa ikwasivumela ukuba sisebenzise iLizwi, i-Excel kunye nePowerpoint ngewebhu, ngaphandle kokufaka ii -apps ngaphandle kwexesha .
Ixabiso lokubhaliselwa ngonyaka kwiOfisi 365 yobuqu (1 umsebenzisi) ngama-euro angama-69 (i-7 euros ngenyanga). kwaye ibandakanya iLizwi, i-Excel, iPowerpoint kunye ne-Outlook ngebrawuza kunye nokuFikelela kunye noMshicileli njengesicelo sekhompyuter. Iyafumaneka kwiWindows, i-MacOS, i-iOS kunye ne-Android
Ukuba siceba ukusebenzela ekhaya kwixa elizayo, asizukufumana sisombululo sibhetele kunale, kungekuphela ngenxa yokuhambelana kunye nokubekwa emgangathweni kwifomathi yayo, kodwa nangenxa yenani elikhulu lezinto ezinokusinika zona, iinketho ezigubungela nayiphi na Isidingo esinokuthi sivele, sinokuwela ezingqondweni zethu.
Ukuba ungumsebenzisi we-Mac, iApple isinika amaphepha, amanani kunye ne-Keynote simahla, usetyenziso esinokwenza ngalo naluphi na uhlobo loxwebhu lombhalo, ispredishithi sokubonisa. Nangona inani leenketho esinika lona aliphezulu njengeOfisi, ingaphezulu kunokwaneleyo kubasebenzisi abaninzi. Ingxaki esisinikwa sesi sicelo kukuba inefomathi yayo, eya kusinyanzela ukuba sithumele amaxwebhu esiwenzileyo kwiifom ze-.docx, .xlsx kunye .pptx
Olunye uhlobo olusimahla esilunikwa nguGoogle, olubizwa ngokuba yiGoogle Amaxwebhu, lusivumela ukuba senze amaxwebhu kwisikhangeli ngaphandle kokukhuphela nasiphi na isicelo. Ingxaki ngamaGoogle kuXwebhu kukuba isebenzisa eyayo eyandisiweyo, ulwandiso olungahambelaniyo neOfisi, ke kuyakunyanzelwa ukuba siguqule uxwebhu ngalunye esilenzayo, nomngcipheko wokulahleka kwefomathi okubandakanya.
Isicelo sokuqhagamshela kwezinye iikhomputha ukude
Ayinguye wonke umntu onethamsanqa ngokwaneleyo lokuba akwazi ukusebenza ekhaya ngenxa yokuba inkampani yakho isebenzisa usetyenziso lolawulo olufumaneka kuphela kwinkampani yakho. Kuxhomekeka kumphuhlisi wesicelo, mhlawumbi unokukhetha esivumela ukuba sisebenze kwezinye iikhompyuter kwi-intanethi. Ukuba akunjalo, sikhona isisombululo.
I-TeamViewer yenye yeeklasikhi zekhompyuter, kuba njengeOfisi, ayikaze ibe nembangi enkulu enikezela ngeempawu ezifanayo. I-TeamViewer isivumela ukuba silawule kude nasiphi na isixhobo, izixhobo esinokukopa okanye ukuthumela kuzo iifayile, sibambe incoko kunye nomsebenzisi ofanayo okanye enye into ethi qatha engqondweni. Le nkonzo iyafumaneka kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, iiWindows kunye neMacOS, kodwa ayikhululekile, nangona sesona sisombululo sisiso ukuqhagamshela kude kwiikhompyuter.
Idesktop ekude yeChannel sisisombululo sasimahla esisifumana kuGoogle ukuba sikwazi ukudibanisa ukude kwenye ikhompyuter, nokuba sisebenzise usetyenziso lolawulo esisisebenzisa eofisini, ukudibana noxwebhu, ukulungisa ingxaki yokusebenza kwikhompyuter. Ukongeza, iyafumaneka kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, ukuze sikwazi ukufikelela kuyo ngokude kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ezona zicelo zibalaseleyo zokusebenzela ekhaya
Sihlalutya nzulu i-Samsung Galaxy S20 5G entsha